अमेरिकामाबाट एक नेपाली पत्रकारको प्रश्न : राज्य ठूलो कि रवि ?
उनकै पूर्वसहकर्मीले आ’त्मह’त्या गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका आधारमा यतिबेला रवि लामिछानेलाई छानविनका लागि हिरासतमा लिइएको छ । हरेक राज्यमा कानुन हुन्छ र त्यो कानुनलाई लागू गराउने निकाय भनेको प्रहरी हो ।
हामी आवेश वा भावनामा बगेर भन्दा पनि ठण्डा दिमागले सोचेर पहिला राज्य अनि ब्यक्तिको कुरा गर्नुपर्ने समय आएको हैन र ? राज्य बलियो भयो भने पत्रकार, कलाकार, वा कुनै पनि क्षेत्र दीर्घकालका लागि नै बलियो बन्छ । तर, त्यसो नभएर कुनै ब्यक्तिलाई बलियो बनाउन थालियो भने त्यसले सिर्जना गर्ने भनेको त अराजकता नै हो । अनलाइनखबर